Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Miala amina pirinty maintso mandritra ny fialantsasatra any Seychelles
Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • tompon'andraikitra • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Nalaza noho ny hatsaran-tarehiny madio i Seychelles ary nalaza ho tanjona maharitra miaraka amin'ny 47% ny velaran-taniny arovana sy ekena amin'ny ezaka lehibe nataony hitehirizana ny lova voajanahary manan-karena amin'ny alàlan'ny fomba fanao maharitra sy fepetra.
Seychelles dia toerana maharitra azo tanterahina any amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina.
Ny nosy Seychelles no nanjary toerana voalohany namoronana ny vondrom-piarahamonin'izy ireo amin'ny sehatra Global Impact Network.
Sehatra niomerika ity izay ahafahan'ny mpampiasa manara-maso ny refy sy mampiseho ny hetsika maharitra amin'ny alàlan'ny fanamby mahafinaritra sy azo tratrarina momba ny olan'ny tontolo tena izy.
Seychelles dia faha-38 amin'ny Tondro fampisehoana ny tontolo iainana amin'ny taona 2020, voalohany ao amin'ny Faritra Sub-Sahara ary amin'ny maha fanjakana kely nosy azy; ny fiarovana ny natiora dia fomba fiaina any Seychelles.
Mahatsiaro fa na dia misy fiatraikany be dia be aza ny dia, dia mety hanimba be ihany koa ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fametahana ireo ekosistia marefo ary manampy amin'ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Seychelles, amin'ny maha toerana maharitra maharitra fahazoana loka any amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina, dia mitazona ny dia lavitra ho toy ny ampahany manan-danja amin'ny maodelin'ny orinasany.
Ireto misy zavatra dimy azon'ny mpitsidika atao mba hanampiana anao ho anisan'ny hetsika fizahan-tany maharitra mandritra ny fialantsasatrao any Seychelles:
Fantaro ny toerana alohan'ny dianao
Raha te hanana traikefa feno momba ny toerana haleha ianao dia fantaro ny mampiavaka an'i Seychelles na dia mbola tsy tonga aza ianao. Vakio ny momba ny nosy isan-karazany natokana ho an'ny fitehirizana sy ny zavamaniry sy ny biby tsy manam-paharoa any Seychelles hahafantarana izay halehanao hanatsarana ny zavatra niainanao.
Tohano ny toeram-ponenana eco-friendly sy ny mpanome tolotra fitsangatsanganana tompon'andraikitra hafa rehefa any Seychelles. Mpiara-miasa mpizaha tany maro no mahatsapa ny vokany amin'ny fihetsika madinidinika amin'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fampiasana angovo azo havaozina, fananana rafitra fitantanana fako mahomby, fanodinana, na fananganana amin'ny fampiasana akora azo havaozina aza.
Rehefa any Seychelles ianao dia azonao atao ny mampihena ny dian-tongotranao amin'ny alàlan'ny fanofana bisikileta hitsidika ireo nosy kely toa an'i Praslin sy La Digue.
Aza manisy ratsy
Rehefa mitsidika ireo nosy tsara tarehy dia tandremo sao manelingelina ny tontolo iainana malemy. Zava-dehibe ny tsy hanesoranao ny vokatra avy amin'ny biby, ny vatolampy, ny zavamaniry, ny voa na ny akanin-vorona ary aza hadino ny mikitika na mijoro amin'ny haran-dranomasina. Aza esorina mihitsy ireo akorandriaka mivantana avy any an-dranomasina, ary aza mifidy vokatra vita amin'ny sokatra sokatra na karazana tandindonin-doza hafa, koa tsy ara-dalàna ny fanaovana izany.
Misy fotoana azo antoka ny fiarovana ny mpitsidika mba handray anjara amin'ny Seychelles manomboka amin'ny fanadiovana amoron-dranomasina matetika ka hatramin'ny fandraisana anjara amin'ny programa famerenana amin'ny haran-dranomasina tsy manadino ireo hetsika fitahirizana an-dranomasina hafa, ireo mpitsidika dia afaka manampy amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo vondrom-piarahamonina tontolo iainana eo an-toerana.
Tandindomin-doza ny paradisa amin'ny alàlan'ny fako eny an-tanety sy an-dranomasina; tadidio fa ento miaraka aminao foana ny fakonao. Ny fako toy ny harona plastika dia manimba ny fiainana an-dranomasina toy ny trondro sy sokatra, ka miafara amin'ny rojom-pihinanana.
Loharano sarobidy ny rano amin'ny nosy kely; raha any amin'ireo nosy azafady mba hitahiry rano. Azonao atao ny manampy ny fiantraikany amin'ny alàlan'ny fisotroana ranonorana fohy kokoa sy amin'ny fampiasana lamba famaohana mandro fa tsy fanasana isan'andro.